Du'aatii, gudeedamuufi gidiraa jiruu biyya Arabaa dhuma dhabe - BBC News Afaan Oromoo
Du'aatii, gudeedamuufi gidiraa jiruu biyya Arabaa dhuma dhabe
"Namni du'ee yoo awwaalamu argeera. Dubartootni yoo gudeedamanis argeera. Boonyeetuma bira dabarree deemna turre," Zamzam Hassan.
Godinichi namoota biyyaalee Arabaa gahuuf karaa eegalan hedduuf iddoo jalqabbii beela, dheebuufi dararaati. Dallaalota seeraan alaaf immoo iddoo mijataa galii lalisaa ta'e itti argatan.
Godinni kun Naannoo Amaaraatti godina addaa sablammii Oromooti. Gaazexeesitootni BBC torbeewwan muraasa dura gara godinichaatti imalan haala jireenya godaansa seeraan alaa godinicha keessa odeeffataniiru.
''Jireenya biyyaa irra kan biyya Arabaa anaaf wayya''
Dargaggootniifi daa'imman jireenya fooyyee barbaacha haasaa mi'aawaa dallaalotaan gowwomfamanii godaansatti seenan ammallee heddu.
Daandiiwwan godaansa seeraan alaa sadii gama Jibuutii, Somaaliyaafi Sudaan jiran godaantota godinicha irraa ka'an halkan halkan keessummeessaa bulu.
"Guyyaa yoo deemne waan qabamnuuf yeroo hunda halkan sa'aa jahaa hanga solaata subii qofa imalla" jetti al lama karaa seeraan alaatiin kan godaante Zamzam Hassan.
Godinichatti lammiileen biyyaalee akka Yamanitti hidhaa fi darara irra turan yoo deebi'an, dargaggootni biroon ammoo asii gara biyyaalee Arabaa deemuuf qophiirra jiru.
Hiyyummaa, maallaqa fi dararraa…
Dargaggoo Umar Sa'id umriisaa waggaa 16tti aanaa Jiillee Dhummuugaa irraa ka'uun godaane. "Arabni tokko waan ofii jibbe dalagi yoo sin jedhe diduu hin dandeessu. Inuma dalagda" jedha dargaggoo Umar.
Ragaan Dhaabbata Godaansaa Idil addunyaa IOM irraa arganne dhaabbatichi bara 2018 fi 2019 qofa daa'imman qofaa isaanii godaanan 2,500 ol biyyaalee gaagaraa irraa gara Itoophiyaatti deebisuu isaa hima.
Hiriyoota isaa sadi walin umriisaa wagga 16ti kan godaane Umar Sa'id daraaraa godaansa seeraan alaa wayita dubbatu imimmaan isaa to'achuu dadhabe.
"Ani karaa Bosaasoo Somaaliyaan miilaan deeme. Hanga Bosaasoo geenyu baay'ee dararamne. Namootni halbee nutti qabanii uuffata uffannee jiru dabalatee waa hunda nurraa fudhatan. Waan nyaatnu dhabnee kadhannee lubbuu oolfanne" jechuun hima.
Umar maatinsaa harka qalleeyyii ta'uu isaaniitin barnoota kutaa saddetaffaa addaan kutee gara Saawudi Arabiyaa gahuuf godaanuusaa dubbata.
Dargaggoon kun obbolleessi isaa quxusuun umriinsaa wagga 17 ta'e maallaqa 20,000 ol dallaalotaaf kaffalee deemee amma Saawudi Arabiyaa keessa hojii malee taa'aa akka jiru nutti hime.
Obbo Antanah Fiqaadu qajeelcha dhimma hojjetaa fi hawaasummaa godina addaa sablammii Oromooti bobba'iinsa hojii fi bulchiinsa hojjeta fi hojjechiisaa irratti hojjetu.
Isaanis harka qallummaan dabalataan ilaalchi hawaasni godinichaa godaansaaf qabus dhimmoota godaansa seeraan alaa hammeessan keessaa tokko akka ta'e himu.
'Leenjiin argadhuun biyyoota Arabaa deemee hojjechuun fedha'
Dhaabbatni Godaansaa Idil addunyaa IOM bara 2018 fi 2019 keessa lammiilee Itoophiyaa 13,000 ta'an gara biyyaatti deebisuu isaa ragaan arganne agarsiisa.
Qajeelcha dhimma hojjetaa fi hawaasummaa godina addaa sablammii Oromootti ogeessa kan ta'an Obbo Antanah Fiqaadu godaansi seeraan alaa rakkoo hawaasummaa magaalas ta'ee baadiyaatti dargaggoota dhiirolis fi dubartoota miidhaa jiru ta'uu himu.
Akka godinichaatti namoota karaa seera qabeessa ta'en godaanan caalaa kunneen karaa seeraan alaan godaanan heddu dha.
Waggoota shanan darbanittis lammiileen godinicha keessaa karaa seeraan alaan godaanan 11,000 ol gara godinichaatti deebi'aniiru.
Godaantootni karaa seeraan alaa biyyaa bahanii deebi'an heddunsaani miidhama qaamaa dabalatee rakkoolee hawwaasummaa fi fayyaaf saaxilamani gara biyyaa akka deebi'an Obbo Antanah dubbatu.
Maallaqa hojjetanii argatan saamamuun dabalataan rakkoo xinsammuuf saaxilamanii kan deebi'anis baay'ee dha jedhu Obbo Antanah.
Karaa seeraan alaan gara Yamanitti erga godaanee booda waggoota lammaaf turee kan deebi'e dargaggoo Umar Sa'id ammallee garasumatti deebi'uuf akka ta'e nutti hime.
Dhaabbata leenjii magaala Kamisee keessatti argamuttis hojii kunuunsa daa'imanii fi namoota fedhii addaa qabanii leenji'aa jira.
"Karaa seeraan ala ta'en deemun rakkoonsaa fokkataa dha. Ani baay'ee jibbeen jira. Namnis karaa seeraan alaan akka deemu hin barbaadu" kan jettu Zamzam Hassan waggoota kudha lamaaf godaansarra turtee amma magaala Kamisee keessa jiraachaa jirti.
Namootni karaa seeraan alaan akka hin godaanne yeroo hunda gorsullee nan dhagahan jechuunis nutti himte.
Turtii keenya naannoo Amaaraa godina addaa sablammii Oromoo keessaatin hojiin lammiilee godaansa seeraan alaan deemanii deebi'an deebisanii dhaabuf hojjetamu gadi aanaa ta'uu dhageenye.
Goodayyaa suuraa Aaddee Zamzam Hassan
Qaamolee mootummaa dhimmi godaansaa ilaallatu irraa ragaalee argachuunis ulfaataa ture.
Qajeelcha dhimma hojjetaa fi hawaasummaa godina addaa sablammii Oromooti ogeessi bobba'iinsa hojii fi bulchiinsa hojjeta fi hojjechiisaa Obbo Antanah Fiqaadu garuu namootni karaa seera qabeessa ta'een akka deemanif hojjechaa jirra jechuun nutti himan.
Jordaan, Qataar, Sa'udii Arabiyaa: Hojiif biyya alaa deemuuf qabxiilee baruu qabdan